Ciidamada Puntland oo ku dhaqaaqay goobta lagu hayo markabka shisheeye | Baydhabo Online
Ciidamada Puntland oo ku dhaqaaqay goobta lagu hayo markabka shisheeye
Ciidamada Daraawiishta Puntland, ayaa waxaa la soo sheegaya in ay ku dhaqaaqeen Degmada Caluula ee Gobolka Bari, halkaasoo la soo sheegayo in lagu hayo markabka shisheeye.
Kooxo kalluumeysato deegaanka ah, ayaa Isniintii markabkan ka qafaashay Xeebaha Degmada Caluula, waxaana hadda leeyahay waxay ku hayaan Xeebaha Deegaanka Biya-cadde, oo 11km u jira Caluula.
Ciidamada Daraawiishta Puntland, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu la socdo Gudoomiyaha Degmada Caluula, Cali Shire Maxamuud Cismaan, ujeedkooduna uu yahay in ay soo furtaan markabka iyo shaqaalaha la socdaba.
Gudoomiyaha, ayaa falkan ku tilmaamay fal burcad badeednimo ah, inkastoo sida uu qiray in ragga falkaasi gaystay ay yihiin kalluumeysatadii deegaanka, oo ka dhiidhiyay xaalufinta ay maraakiibta shisheeye ka wadaan Xeebaha Puntland.
Odayaasha Dhaqanka ee deegaanka, ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in Ciidamada Puntland ay dhinaca cirka ka taageerayan diyaaradaha shisheeye, oo ka soo dulkacay maraakiibta NATO ee ku sugan Xeebaha Somaliya.
Markabkan oo lagu magacaabo ARIS, ayaa ka soo amba baxay Magaalada Djibouti, waxaana uu ku sii jeeday Magaalada Muqdisho, iyadoo la rumeysan yahay in ay wadada ka qafaasheen illaa toddobo nin, oo ku hubeysan hubka fudud.
Warar is khilaafsan, ayaa ka soo baxaya tirada shaqaalaha saaran markabkan. Wararka ugu badanse waxay sheegayan in shaqaalaha saaran ay tiradoodu u dhaxeyso 7-10 nin.
Markabkan oo ka diiwaan-gishan Wadanka Emirate-ka Carabta, isla-markaana watay Calanka Sri Lanka, ayaan la garanayn waxa uu xaalkiisu ku dambeen doono.